Channel Views: 47,706
kinsaro1 on Dec 29, 2011
shwepaleik on Dec 10, 2011
prime on Oct 18, 2011
ဟဲရို ဘိုအောင်ဒွန်း (ချောတီးးး မှားလို့. လူဂျီးခေါင်းခေါက်ပီး ပြန်တောင်းပန်တာ အဟိ) မ တွေ့တာ အတော်ကြီးကို ကြာနေပီ. ဒီအစ်ကိုဂျီး အလုပ် အရမ်းများနေလို့နဲ့တူပါရဲ့ သချင်းသစ်တွေ တင်ထားတာ ကြာပီ ဆိုမလား ဆိုမလား ကြည့်ကြည့်နေတာ မဆိုလို့ လာဆိုပါဦးလို့ ချန်နယ် အရောက် အတင်း အကြမ်းကို လာရောက်တာင်းဆိုတာပါချင့်. ၀ိုင်ဝိုင်းရဲ့ နှစ်သိမ့်တဲ့တေး အဲဒါလေး ဆိုပေးပါ ဒါဗြဲ. (လုပ်ပြန်ပီ :P )
လေးစားအားကျမိတဲ့ အသံပိုင်ရှင် ဘရိုကိုအောင်ထွန်းဆီကို မငယ်အလည်လာရောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင် ... မငယ်တို့လို ဝါသနာရှင်အသစ်တွေကို အမြဲလာရောက်အားပေးတတ်တဲ့အတွက် ကျေးဇုးလည်းတင် .... ဝမ်းလည်းသာမိပါတယ်အကိုအောင်ထွန်းရေ ... နားမထောင်ရသေးတဲ့ သီချင်းလေးတွေကိုလည်း အချိန်ရရင် ရသလိုလာအားပေးသွားပါမယ် ရှင် ... ဘဝခရီးတလျှောက်လုံး အဖော်မွန်နဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စွာလျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေရှင့် ....း))
chithmuuwai on Aug 31, 2011
Hi bro, Nice to meet you,rnလာလည်သွားပါတယ်နော်....rnbro ရဲ့သီချင်းတွေအားလုံးကြိုက်ပါတယ်......သီချင်းလေးလည်း တောင်းဆိုထားပါတယ်နော်
moezat1984 on Aug 3, 2011
Bro KAT's channel ကိုခဏခဏရောက်ဖြစ်ပေမယ့်. ခုမှပဲ comment ရေးဖြစ်တော့တယ်။ အသံကောင်းအဆိုကောင်းသလို. သီချင်းတွေကို အမြဲတမ်း ပြည့်စုံကောင်းမွန်အောင် ဖန်တီးပီး ဖျော်ဖြေတင်ဆက်တတ်သူမို့. SFY မှာ ကျွန်တော်နှစ်သက်ရတဲ့ အဆိုရှင်ပါပဲဗျာ။ သီချင်းတွေသီဆိုရင်း ပျော်ရွှင်ပါစေခင်ဗျာ။
Deih on Jul 30, 2011
ဒိတ်လည်း အလည်လာခဲ့ပါတယ်..သီချင်းတွေအများကြီးပဲ တစ်ဝနားဆင်မယ်နော်....
ွှSFY မှာ နှစ်သက်အားကျရတဲ့ အသံပိုင်ရှင်..ဘာသီချင်းပဲဆိုဆို နားထောင်ကောင်းလွန်းပီး သာယာပီး ပိုင်နိုင်တဲ့ ဆိုဟန်နဲ့ သီချင်းတွေဆိုတတ်ပီး ကွန်မန့်ကိုလဲသေချာအမြဲပေးတတ်တဲ့ ဘရိုAT ဆီကို.. လာလည်သွားပါတယ်နော်... သီချင်းတွေဒီထက်ဒီထက်များဂျီးဆိုရင်းနဲ့ ပျော်ရွှင်ပါစေ Bro AT ရေ...း)))
edsilva on Jul 18, 2011
Nice listening all your songs. Let's keep the world in peace with songs.
saunghninmoe528 on Jul 17, 2011
sis lay lar lel thwar par tal shint... rnchin twar arr nar sin twar par dal shin...bro yay *****
lovepioneer on Jul 14, 2011
အစ်ကိုကြီရေ လာလည်ပြီးအားပေးနားဆင်သွားတယ်ဗျာ အစ်ကိုဆိုတဲ့ သီချင်းတွေကအရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ အာကျမိတယ် အစ်ကိုကြီးကို
minchit on Jul 4, 2011
Bro Ko Aung Tun si lar lel pa del byar...
amrith on Jul 1, 2011
ကိုအောင်ထွန်း ရဲ့သီချင်းတွေရော အသံကိုပါ အရမ်းကိုကြိုက်ပါတယ်။ အားလည်း ကျမိပါတယ်။အဲဒါနဲ့ အကို့ရဲ့ သီချင်း များကိုနားဆင်အားပေးရင်းနဲ့ လာလည်သွားပါတယ်။အားပေးလျက်ပါ*************************
yuki83 on May 3, 2011
အသံအရမ်းကိုကောင်းတဲ့ bro ဆီကို လာ လည်ပါတယ်.....အမြဲအားပေးနေပါတယ်..နောက်လဲအများကြီးဆိုပါ..နော်
4eva5exy on Jan 22, 2011
bar lo voice ka a`dloug kg ya tar lel.... arr pay thwar tal shin...
elvis on Dec 22, 2010
လာရောက်ချောင်းမျောင်း..နားထောင် သွားတယ်ဗျာ.. ပုဒ်စစ်ပဲ ဂွတ်ဂွတ်
KoThurein on Dec 13, 2010
lar lae thwar dae naw, bro Aung Tun yae...songs dwe lae listen thwar dae....
Maylay94 on Nov 22, 2010
A ko voice ka ayan nr tg loe kg tel naw:Prnthi chin tway so tar dar lel ayan nr tg loe kg tel:P
paradise on Nov 14, 2010
အဖွဲ့သီချင်းတွေမှာ...ခဏခဏတွေ့ဖြစ်ပြီး... သီချင်းတွေအတူတူဆိုနေပေမယ့်... ကိုအောင်ထွန်းချန်နယ်ကို...၀င်ကြည့်တော့.. မရေးရသေးတာ..တွေ့ပြီး... အမှတ်တရဖြစ်သွားအောင်လို့... အမှတ်တရ... စာကြောင်းလေးထားခဲ့ပါတယ်... နောင်အခါ..မောင်နှမတွေ....မတွေ့ဖြစ်ကြရင်.....အမှတ်တရဖြစ်ကျန်စေချင်လို့ပါ.... သီချင်းတွေဆက်လက်ဖန်တီးသီဆိုရင်း... ပျော်ရွှင်ပါစေကိုအောင်ထွန်းရေ....း)
lovememore on Nov 12, 2010
Oh....you must bearelative of rzni
shinmin1500 on Oct 9, 2010
Hey Borther ... Sing more songs ..., Your Freind Shinmin1500
သီချင်းကောင်းကောင်လေးတွေဆိုတတ်တဲ.ကိုအောင်ထွန်းရေ၊ဆက်သာဟစ်ပါ၊အားပေးပါ့မယ်, your audience<>z-khaing
AYANN KG TAL NAW rnAMYAL TANN ARR PAYY NAY TAL NAW
yarthiudu on Aug 27, 2010
Ma Ma song layayan like tal.. listen twar par tal .. arr pay nay par T
u4gyi on Aug 11, 2010
KAT, Lar lel pe song tway listen twar par del...
MAYTHINGYAN on Jul 13, 2010
Bro yay, I like your vocal and singing. Well done .
jpkglay on Jul 12, 2010
ဘရိုကြီးရေ.. အလည်လာပါတယ်ဗျာ..... တခါမှမရောက်သေးလို့...း)))
susannyunn on Jun 30, 2010
ခုဒူ့ channel ကိုရောက်နေတာလဲဟင် :/:/:/ အဟီးးးး လာလည်ပါ၏ အားကိုဂျီး:)))))))) :P >>>>
thuranaingwin on May 28, 2010
ko aung tun yae.....lar pi naw.the chin twe taw taw myar myar nar sin thwar par tel byar....
sithunaung on May 26, 2010
ကိုအောင်ထွန်းရေအလည်လာပြီး သီချင်းတွေနားထောင်သွားတယ်ဗျာ~ အသံနဲ့ဆိုဟန်ကိုကြိုက်တယ်ဗျာ~ အမြဲအားပေးနေတယ်ဗျိုး~း)
Thanzinchitthu on May 10, 2010
bro ရေ...လာလည်သွားပါတယ်ဗျာ..... သီချင်းလေးတွေလည်းနားထောင်သွား ပါတယ်...really nice vocal & sing style
soramoe on Apr 24, 2010
KoAT I kept forgetting2come n say thank u for ur encouragement when I joined here ***** u have such an amazing vocal n u r one ofafew people that I look up in SFY .
sweetorchid on Feb 22, 2010
ကိုအောင်ထွန်းရဲ့ Channel ကိုလာလည် သွားပါတယ်ရှင့် မာရဇ္ဖသီချင်းလေး တွေနောက်ထပ်အများကြီးဆိုပေးဖို့ အကြောင်းလာကြားတာပါရှင့်...
melody_queen on Feb 16, 2010
bro lar lal twar tal naw .. :) ,, bro vocal ka kaung taw .. profile hti taung lar kyi tar par .. :) ... take care ..
alwaysonglover on Feb 15, 2010
skywalker on Feb 14, 2010
lar lae thwar par tel bro... really like2listen yr songs ....asoayan kg yar bae .... love all yr song choice .... brilliant ....:)))))))
khaki on Jan 2, 2010
arr payy nay par tal bro yay ... ayan ko kaung par tal
thuyeekg on Dec 7, 2009
chan2008 on Dec 7, 2009
Ye lay song so kyi par lar???
panshwe on Nov 28, 2009
tha chin lae aso kg, remix loat tar lae kg tae., parami shin bro aungtun yay, lar twar tae naw.. cheers !!
tharnge123 on Nov 27, 2009
Tha chin tway yaw so htar tar yaw taw taw kaung par tal.
seven on Sep 16, 2009
THA CHIN A SO KG TAE'...BRO....LAR PEE ARR PAY PAR TAL NAW...
YinLiHoe on Sep 11, 2009
Hi, I want to add comment your last song, but there is no place for add comment. I don't know why? Therefore, I came to visit you account. Good and Cheer Man.
lucky7 on Sep 6, 2009
friend, your voice is very nice
romeo on Aug 30, 2009
kaung loon lo lar arr pay thwar par dal bro...always 5*4u....
flowerlover on Aug 9, 2009
LittleBird on Aug 6, 2009
Hey Ko Aung Tun. I don't know who has to call akogyi to whom, ;D. You are one of the most famous singers as your songs are in the category of the most viewed. Appreciate it.
angle on Aug 3, 2009
you sing really well, keep it up!!
snowwhite2000 on Jul 10, 2009
hay very nice singer,,try go on my fri .
hi bro.. u have great vocal and i enjoy to listen ur songs.... i'm one of ur fun....
maintmaintt on Jul 5, 2009
sch7677008 on Jun 23, 2009
fri,you also the best one par.
MH on Jun 13, 2009
A ko gyi lar lal dal naw
hi hi, thanks for your comments on my song. and i like your voice. more songs pls naw
oak on May 9, 2009
hi bro .. amyae err pay nay dae byo!
soemoe on May 4, 2009
Brother yay!Mingalarper!I like your voice and singing style! Really nice!
mrcastle on May 3, 2009
u tooagreat singer,fri! carry on!
wadana on May 2, 2009
You're the great singer of me:)
Hi nice to meet u !!! to bein favor of u ^_^
ayemyat90 on Apr 9, 2009
Esther on Apr 4, 2009
greenlay on Mar 20, 2009
you are the best. keep going :)
Taw_Thar_Lay on Mar 12, 2009
Great singing and nice voice.
brownlay on Feb 26, 2009
You areavery talented singer with good vocal.
Views: 3005 Duration :06:50
Views: 2151 Duration :03:31
Views: 2066 Duration :04:02
Views: 1493 Duration :05:47
Views: 1330 Duration :03:46
Views: 1315 Duration :04:04
Views: 1250 Duration :04:46
Views: 1196 Duration :04:42
Views: 1159 Duration :04:18
Views: 1044 Duration :03:33
Views: 986 Duration :03:16
Views: 965 Duration :04:35